people Nepal » नौ अर्बको भ्रष्टचार गर्ने भ्रष्टचारीलाई अख्तियारले माग्यो तीन अरव धरौटी ! नौ अर्बको भ्रष्टचार गर्ने भ्रष्टचारीलाई अख्तियारले माग्यो तीन अरव धरौटी ! – people Nepal
नौ अर्बको भ्रष्टचार गर्ने भ्रष्टचारीलाई अख्तियारले माग्यो तीन अरव धरौटी !
काठमाडौँ –अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न कर छलीमा सम्लग्न रहेको भन्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीन जनालाई जनही रु तीन अर्बको धरौटी माग गरेको छ ।
‘हालसम्म गरिएको अध्ययनका आधारमा धरौटी माग गरिएको हो’– आयोगका उच्च अधिकारीले भने, ‘कुल रुपमा रु नौ अर्ब बराबरको बदमासी गरेको देखिएकाले दामासाहीमा रु तीन÷तीन अर्ब धरौटी माग गरिएको हो । फरार रहेकाको हकमा खोजी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।’
डिसहोम एक्सन स्पोर्टस्मा विश्वकपको नेपाली कमेन्ट्री
नयाँ र पुराना सांसदबीच किन विवाद ?
क्वाटर नपाएपछि सञ्चार राज्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको निजी घर